Apple TV nwere ike ịnwe nkwado nkwalite televishọn, yana nkwekọrịta sitere n'aka ndị na - ekesa nnukwu ihe | Esi m mac
Apple TV nwere ike ịnwe nkwado nkwalite telivishọn, yana nkwekọrịta site n'aka ndị nkesa buru ibu
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na Apple na-emechi nkwekọrịta iji nye ndị ọrụ Apple TV ọrụ ndenye aha nye ụlọ ọrụ mmepụta atọ dị ogologo nke: HBO, Oge ngosi, na Starz. Anyị maara ozi site na a akụkọ bipụtara site Recode awa ole na ole gara aga. Ruo ugbu a, ọrụ ahụ ga-adị na US mana nke a ga-abụ ikpo okwu iji bulie ọrụ na ngalaba dị iche iche nke ndị a ma ọ bụ ndị ọzọ na-ekesa ọdịnaya. N'ụzọ dị otú a, Apple ga-abata na bọọdụ asọmpi nke ọrụ telivishọn ụgwọ.
N'otu oge ahụ, Apple ga - enwe ikeiche onwe ya na asọmpi ahụ, ebe ọ bụ na a na-enyekarị ọrụ ndị a: ma ọ bụ dị ka ọrụ nweere onwe ya, ma ọ bụ dị ka ihe mgbakwunye na eriri nke eriri ma ọ bụ ọwa ntanetị, dị ka ọ dị na isi ndị ọrụ telivishọn na telivishọn. Ya mere, nhọrọ ewepụtara ga-abụ n'ọnọdụ ùkwù ma ọ bụ ọtụtụ ngwa na otu ogbe. Ọ bụ atụmatụ nke Apple jiri n'oge ndị ọzọ, dị ka mwepụta vidiyo na ederede edezi n'oge na-adịbeghị anya, na ọnụ ala, karịa zụta iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, Apple na-ere ọrụ ahụ HBO na ya n'elu ikpo okwu maka telivishọn na ego nke $ 15 / ọnwa, $ 11 / ọnwa na ikpe nke Oge ihe nkiri na iku ego Starz A na-ere ọnụ ya na $ 9 / ọnwa. Ruo ugbu a anyị amaghị ọnụahịa nke ọrụ ndị a ma ọ bụrụ na anyị ejiri ha ọnụ.
Atụmatụ Apple gafere site na ịnye ọrụ ahụ site na Apple TV na iOS. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị megharịa usoro nkwalite ejiri ya Egwuregwu Apple, Anyị nwere ike ịnwe oke nkwado oge, nke na-enye anyị nnwale nke ọrụ ahụ na ọnụ ala.
Agbanyeghị, nkwekọrịta enwere ike ka nwere ike ịdị anya. Dabere na isi mmalite ụlọ ọrụ:
Apple enweghị nkwekọrịta ngwugwu na netwọkụ ọ bụla dị elu. Ndị nnọchi anya HBO, nke Time Warner nwere, na Showtime, nke CBS, jụrụ ịza ajụjụ. Ndị nnọchi anya Lionsgate nke Starz na Apple azaghị arịrịọ maka nkọwa.
Ikekwe ngosi nke nkwekọrịta ga-eme na ngosi nke Ọgbọ nke atọ Apple TV, nke na-enye amụma nkwado maka 4k.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple TV nwere ike ịnwe nkwado nkwalite telivishọn, yana nkwekọrịta site n'aka ndị nkesa buru ibu
Infographics Lab na Photo Retouch, na-ere obere oge
Wepu oyiri faịlụ na oyiri File Finder, free maka a obere oge